Apho Kuhlangana Isitshayina Girls kwi-Beirut - e-Asia Dating Ingcaphephe
Apho Kuhlangana Isitshayina Girls kwi-Beirut – e-Asia Dating Ingcaphephe
Beirut zibe eyona ndawo ukuya kuhlangana kwaye umhla Isitshayina girls (kunye Shenzhen kwaye Chengdu kanjalo vying kuba isihloko). Yintoni enza kube ngcono kunabanye Isitshayina izixeko. Ngenxa Beirut ngu omnye wemiceli-izixeko kwi-China, ufumane ezinye hottest Isitshayina girls ukuza apha ukususela zonke phezu kweli lizwe ukukhangela amathuba.
Kwaye uninzi ngabo ngakumbi vula ukuya kwintlanganiso dating foreigners ngaphezu kwezinye izixeko. Kodwa ngokungafaniyo i-shanghai, uphumelele khange kuhlangana njengoko abaninzi igolide-diggers.
Girls abeza Beirut ingaba rhoqo ezantsi emhlabeni, fun, quirky kwaye ephumayo
Eyona ndawo ukuya kuhlangana girls kulo mhla, izandla phantsi, Soliton dolophana. Ehamba jikelele Soliton kwi sunny impela-veki kwi-Meyi, ndiya rhoqo bazive ngathi i-kid kwi candy-shop. Hayi kuphela kukho eziyi-ka kakhulu nabafana girls, kodwa Soliton kanjalo elikhulu umhla indawo. Ngaphandle emhlabeni inqanaba ingaba ilanlekile ka-stores kuba ukuthenga okanye ifestile inqwelo. Oku mall uqhubekeka kwi-basement, apho kukho kanjalo ifilim theater kwaye elikhulu nge-shop ilanlekile ka-trinkets njenge hats kwaye stuffed izilwanyana ukuba ingaba amashumi ukudlala jikelele kunye. Lwesithathu floor le dolophana ngu bekelela kunye restaurants, ibar kwaye cafes kwaye ukuba ufumane ukudinwa abo ungasoloko yiya kuwo Gomti Emntla Road ukuya Soliton Soho, nto leyo phantse njengoko okulungileyo njengoko dolophana. Ezinye mhla mkhulu iindawo ziquka famous hutong alleyway, nangona oku unako ukufumana crowded kwi sunny weekends. Ukususela akukho namnye unako kubhadula ngokusebenzisa hutongs phezu Houhai, beautiful lake kunye iinkwenkwezi kwaye restaurants engqonge kuyo. Ngexesha lasebusika namnye unako yiya umkhenkce skating kwi houhai, nto leyo yenza omkhulu ebusika umhla. Ngowe ehlotyeni zam endizithandayo umhla iindawo ingaba Chaoyang Park, oyena park esixekweni, okanye Ritan Park, kunye yayo famous Ilitye Boat rock. Ekugqibeleni, xa ufuna phezulu ngomhla Umntlantshona end of town kufutshane Wudaokou, Tsinghua okanye Beida campuses yenza omkhulu iindawo kuba ngaphandle imihla, ngeli Bridge café inikezela cozy nook apho unako bonwabele western isimbo brunch, sandwiches kwaye ikofu. Xa ubusuku ziphantsi, ezinye ezininzi nabafana girls kwi-China ukwenza zabo indlela Gongti, okanye Abasebenzi Stadium, apho ujikelezwe yi-clubs kwaye iinkwenkwezi. Zidibene kunye Sanlitun bar street, nto nje -ngomzuzu ukuhamba kude, ezi zimbini kwiindawo ukwenza phezulu uninzi wesixeko nightlife.
Oyithandayo venues kwi-Gongti ziquka Remix kwaye Vices
Oku apho uzakufumana uninzi models kwaye actresses, ihamba kunye ilanlekile ka-yesibini kwisizukulwana otyebileyo. Kuba upscale venues apho ufaka kusenokwenzeka ukuba ahlangane zinokuphathwa girls (hayi iselwa njengoko zinokuphathwa njengoko Remix nangona) othetha isingesi, khangela ngaphandle Xiyu Kwenkundla ngomhla Park Hyatt, okanye Spark kwi Ndawo. Kuba nighttime imihla, steer cacisa le nelikhwazayo clubs kwaye iinkwenkwezi kwi-Gongti kwaye Sanlitun, intloko emva phezu hutong kwiindawo okanye Houhai, apho kukho dozens olukhulu iinkwenkwezi. Kwakhona, ukuba awuqinisekanga phezu ngasentshona icala, Wudaokou sele ilanlekile ka-clubs kwaye iinkwenkwezi apho kukho eliphezulu ubalo ka-college abafundi foreigners. Propaganda yayo, twin udade club Sensation ingaba mhlawumbi eyona kakuhle-ezaziwayo kwaye eyona iindawo ukukhetha phezulu girls, nangona umgangatho uza ngokubanzi hayi kuba njengoko phezulu njengoko Gongti kwaye Sanlitun. Beirut kubaluleke ngokwenene isixeko esikhulu xa oko iza intlanganiso abafazi, akukho mcimbi ukuba ukhe ubene a isidalwa ka-ubusuku okanye bakhetha kuba umandlalo nge indebe oluhlaza iti njengoko ezongeziweyo yesixeko qala kwi isiqulathi seefayili njalo. Omkhulu nto malunga isixeko kukuba kukho abaninzi kangaka ezifihliweyo gems ungakwazi ukuchitha iminyaka exploring kubo bonke.
Ngoku ke olukhulu ixesha ukufumana wemka
← Kutheni na Isitshayina Abafazi Ezama kuba Ubudlelwane kunye Western Abantu
China-ICQ lencoko →